Izay ao Los Angeles no iray Taona, antitra iray ny olona hihaona vehivavy izay mitady ho an'ny lehibe sy ny fifandraisana. Mampiaraka France Site
Izay ao Los Angeles no iray Taona, antitra iray ny olona hihaona vehivavy izay mitady ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana. Mampiaraka France Site
Ny fahalalana tsara indrindra ny ankamaroan’ny vehivavy dia mitady fifandraisana matotra. Raha toa ianao mahatsapa ho toy ny ianao dia efa nilalao, dia izy fotsiny fa tsy hoe ho anao, fa raha tsy izany dia te-fifandraisana lehibe, fa mety ho amin’ny olon-kafa.
Ary satria izany dia karazana fiaraha-monina ny olona izay tsy mandeha na aiza na aiza, trano fisotroana ary na dia ny fikambanana no tsara tarehy tena tsara toerana mba hitsena ny vehivavy. (Nihaona ny vady tsara ao amin’ny trano fisotroana sy nahazo tsara ny vehivavy izay te-fifandraisana matotra, eto Hafa tsara toerana dia nandeha nidina teo amoron-dranomasina, boky toeram-pivarotana, ny oniversite, ny fampianarana, ny sary hoso-doko kilasy, ny divay divay tsiro, gyms, milalao volley teo amin’ny tora-pasika, ny tranom-bakoka, hiking toerana, ny asa, ny Starbucks, ary na dia fiara fitateram-bahoaka mijanona. Eny, maro ny manam-pahaizana, mandray ny fitateram-bahoaka mba tsy ho ratsy ny fifamoivoizana. Afaka hihaona Angelenos Palm Springs, San Diego, ary na dia Las Vegas (ny indray metatra ho an’ny voly ny faran’ny herinandro). Fotsiny aza ho latsaka amin’ny fandriky ny zavatra tsara indrindra manaraka. Maro tsara tarehy ny olona eto, na izany aza ho afaka mankasitraka TSARA dia hiaro anao amin’ny fahoriana ary nandany ny fotoana sy ny ezaka (sy ny vola). Mihevitra aho fa izany dia tsy mametraka fa ny predisposition mankany amin’ny fiarahana, ny fiainana sy ny fifandraisana amin’ny ankapobeny izay zava-dehibe. Ho namana, tsiky, hiresaka ny mahafatifaty olon-tsy fantatra.
Afaka miezaka online mampiaraka toerana toy ny eHarmony
Tsy afaka mametraka ny fepetra sy ny ho mendrika hahita ny lalao. Ny ankamaroan’ny olona amin’ny karama toerana toy izay mitady ny fifandraisana matotra. Tsy izay aho dia mampiasa ny iray na ny fahazoan-dalana azy, fa ny olona sasany no nanana mendrika hiaina amin’ny lalao mpanao. Betsaka kokoa ny mahazatra ao anatin’ny fiaraha-monina Jiosy LA. Izany dia haingana, mahomby sy mamono ny helo avy nirenireny teny an-dalambe mitady ny daty na ny fametrahana ny dokambarotra ao amin’ny taratasy (izay izaho ve tsy nahare na iza na iza raha ny marina no manao). Hatreto Lalao efa tsara toerana mampiaraka ve aho nahita ny olona dia ara-dalàna (teny manan-danja any) sy ny matihanina (aka gainfully niasa) sy liana amin’ny tena mampiaraka (tahaka ny mifanohitra amin’ny babo)
← Tsy misy fisoratana anarana Mampiaraka
© 2019 Ny Lahatsary Amin'ny Chat France